समाजको विकास बिना मुलुककोे विकास असम्भव::elumbinikhabar.com
समाजको विकास बिना मुलुककोे विकास असम्भव
साबिक धकधई गा. वि. स. हाल रोहिणी गाउँपालिका वार्ड नंं. ३ धकधई बजार निवासी नेपाली कांग्रेस क्षेत्र न.ं १ को सचिव वैजनाथ सहानी (मुकेश) २०४४।४।२६ गते पिता सागर साहनी र माता राधा देवी साहनीको कोखबाट जन्मिएका हुन् । २०५९ सालमा राजनीतिमा प्रवेश गरी नेपाल विद्यार्थी संघ रुपन्देहीको जिल्ला सदस्य हुँदै २०६३ मा रुपन्देहीको सह सचिव, १२ औँ अधिवेशनबाट क्षेत्र नं. १ को क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष, १३ औँ अधिवेशनमा क्षेत्रीय सचिव २०७२ सालमा पिछडा वर्ग समन्वय समिति रुपन्देहीको उपाध्यक्ष २०६३ साल देखि लुम्बिनी विकासको परिषद सदस्यको रुपमा कार्यरत रहेका साहनी हाल क्षेत्र नं. १ को नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय सचिवको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । समाज विकास र दलका नेताको क्रियाकलाप प्रति असन्तुष्टिमा केन्द्रित रहेर लुम्बिनीखबरका प्रतिनिधि (पत्रकार) पशुपति यादवले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश ः
वैजनाथ साहनी क्षेत्रीय सचिव, नेपाली कांग्रेस, क्षेत्र नं १, रुपन्देही
समाज विकासमा यहाँको योजना के छ ?
–समाजले विकास नगरी मुलुकले विकास गर्न सक्दैन । त्यसकारण समाज भित्र रहेका समस्याहरु अशिक्षा, बेरोजगारी लगायतका समस्याहरु समाधान गर्न सदैव तत्पर रहेको छु ।
नेपाली जनतालाई राजनीतिक दलका नेता तथा राजनीतिक क्रियाकलाप प्रति यति धेरै असन्तुष्टि जाग्नुको कारण के हो ?
– यहाँ यो प्रश्नप्रति म पूर्णरुपमा सहमत छैन । नेपाली जनताले यहाँका राजनीतिक दल र इमान्दार नेताहरु प्रति पूर्ण विश्वास र सहयोग गरेर नेपालमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । केही व्यक्ति राजनीतिमा लागेर भ्रष्टाचार गर्ने, आफ्ना आश्वासनहरु पूरा नगरेका कारणले केही व्यक्ति प्रति जनताको असन्तुष्टि होला, जुन आंशिक रुपमा छ ।
स्थानीय तहमा यहाँले बसेर राजनीति गर्दै गर्दा जनताका कस्ता समस्याहरु देख्नुभएको छ ?
– स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारका निर्माण पछि जनताका धेरै समस्याहरु समाधान गर्न सजिलो भएको छ । चाहे त्यो विकास निर्माणका कार्य होस्, चाहे विभिन्न सेवा सुविधाका कुरा हुन् । विभिन्न नाममा करभार थपिएको छ, बदलिएको छ, जुन अहिले धेरै जनताको असन्तुष्टीको विषय हो ।
रुपन्देहीलाई काठमाडौँ पछि राजनीतिक क्षेत्रमा बलियो जिल्लाको रुपमा लिने गरिन्छ । यहाँको राजनीतिक नेतृत्व जनतासँग घुलमिल भएर स्थानीय समस्या समाधानतिर लागेको देखिँदैन नि ?
–निश्चित रुपमा राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभई आर्थिक, व्यापारीक, शैक्षिक, पर्यटन, स्वास्थ्य सुरक्षा जस्ता हरेक क्षेत्रमा रुपन्देहीले काठमाडौंलाई नै टक्कर दिएको छ । त्यसमा कुनै दुई मत छैन । जहाँसम्म हामी र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको कुरा छ, जनताका हरेक समस्याहरु सम्बन्धित निकाय एवम् सडक देखि सदनसम्म उठाएर हरेक समस्या समाधानको लागि लागेका हौँ ।
सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करीका विरुद्धमा समेत यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरुले बोलेको सुनिँदैन नि किन होला ?
– जहाँसम्म तस्करीको कुरा गर्नु भयो, हामीकहाँ खुला सिमाना छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु सीमित मात्रामा नजिकको बजारबाट ल्याउनु वा लैजानुलाई म तस्करी मान्दिन । हाम्रो मुलुक कृषिप्रधान मुलुक हो, विभिन्न कारणवश नेपालमा मलखाद नभएको बेला नजिकको बजारबाट मलखाद ल्याउनु पनि तस्करी होइन । मलखादलाई राजस्व लिएर नेपाल भित्र्याउने व्यवस्था नरहेकोले त्यसले राजस्व पनि घट्दैन । तर यथार्थमा तस्कर र तस्करीको कुरा गर्ने हो भने प्रतिबन्धित लागूऔषध लगायतका सामानहरुको सन्दर्भमा सधैँ हामीले बोलेका हौ । प्रहरीले पनि विभिन्न नाकाबाट सामानहरु पक्रेको समाचार हामी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सुन्ने गर्छौँ । हामी तस्कर र तस्करीलाई कुनै पनि रुपमा संरक्षण गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छौँ ।
अहिले क्षेत्र नं. १ को नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट क्षेत्रीय सचिवको रुपमा काम गर्दैगर्दा यस क्षेत्रमा कस्ता चुनौती र सम्भावनाहरु देख्नुभएको छ ?
– प्रचुर सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो रुपन्देहीको क्षेत्र नं. १ भौगोलिक रुपमा भारतको बोर्डर देखि पाल्पाको सिमानासम्म फैलिएको यो क्षेत्र सबै किसिमका विविधताले युक्त छ । कृषि तथा धार्मिक पर्यटनलाई व्वयवस्थित गर्न सकियो भने यहाँको आयस्तर माथि उठ्न सक्छ । भवानीपुर, देवह, ओमसतिया जस्ता धार्र्मिक सम्भावना बोकेका पर्यटकीय स्थलहरुको विकास गर्न सकियो भने पर्यटनको क्षेत्रमा ठूला फड्को मार्न सकिन्छ । त्यस्तै बहुप्रतिक्षित रोहिणी कजरार सिँचाई परियोजना, जुन नेपाली कांग्रेसले नै ल्याएको हो त्यो सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रका हजारौँ हेक्टर जमिन सिँचाई गरेर उत्पादन वृद्धि गरी आयस्तर बढाउन मद्दत पुग्छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ आएको भनिएको छ । स्थानीय स्तरमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले कसरी जनताको पक्षममा काम गर्नुपर्ने यहाँ देख्नु हुन्छ ? सुझाव दिनुहोस् न ?
–सिंहदरबार निश्चित रुपमा गाउँगाउँमा आएको छ । शक्तिको विकेन्द्रीकरण भएको छ । शक्ति ठूलो मात्रमा स्थानीय तहमा पुगेको हो । शक्ति धेरै भएपछि त्यो सदुपयोग पनि हुन सक्छ, दुरुपयोग पनि हुनसक्छ । हरेक कुरामा दुई पाटाहरु हुन्छन् । हामीले चयन गरेका जनप्रतिनिधि इमान्दार, जनता र समाजप्रति बफादार छन् । हामीकहाँ शक्तिको दुरुपयोग भएर पनि धेरै ठाउँमा नमुना कार्यहरु भएका छन् । गलत व्यक्तिले अवसर पाएका ठाउँमा शक्तिको दुरुपयोग पनि भएको छ । फरक भूगोल र वास्तविक समस्या फरक हुन्छन्, तीनलाई समाधान गर्न फरक फरक विधि आवश्यक हुन्छन् । तीनको पहिचान स्थानीय स्तरबाट जति सहज हुन्छ, केन्द्रीय स्तरमा त्यति हुँदैन । विगतमा केन्द्रीय प्रणाली बाट सम्भवथिएन । यो एउटा ठूलो अवसर हो । राम्रो काम गरियो भने स्थानीय तहको मात्र होइन । मुलुककै काय पलट हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले मधेश र मधेशी जनताको पक्षमा कस्ता कामहरु गरिरहेको छ, बताईदिनुहोस् न ?
– नेपाली कांग्रेस कुनै वर्ग विशेष भूगोल विशेषको मात्र नभई समग्र नेपालको पक्षमा उभिने र काम गर्ने पार्टी हो । नेपाली कांग्रेस जहानियाँ राणा शासनको विरुद्ध लडेर राणा शासनको अन्त्य हुदाँ के त्यस्को फाइदा कुन समुदायले पाएन ? पञ्चायतकालको विरुद्ध लडेर न्यायको प्रजातन्त्र होस्, चाहे १२ बँुदे सम्झौतामा अग्रणी भूमिका खेलेर स्थापित गरेको शान्ति होस् फाइदा कुन समुदायले पाएको छैन ? कल्पना गर्नुहोस् बोल्न नपाउने, लेख्न नपाउन,े विरोध गर्न नपाउने व्यवस्था अन्त्य नगरिएको भए आज कसले दलित, उत्पीडित, मधेसी, जनजाति, महिला, किसान, व्यापारीको समस्या कसले बोल्न पाउँथ्यो ।
आफ्ना हकअधिकार माग्ने अधिकार पाएका छौँ । त्यो पनि नेपाली करण व्यसकरण काग्रेस सधै अधिकार रक्षाको पक्षमा हुन्छ । जहाँ सम्म मधेशको प्रश्न छ । सुशीलजीको पालामा संसोधन प्रस्ताव सांसदमा आएको हो । संसोधनको विपक्षमा मतदान गरेको पार्टी सित गठबन्धन गरे । अहिले आफूलाई मधेशको मसिहा भन्ने व्यक्ति सरकारमा हुन बाइस हातको धोती अर्थात २२ जिल्लाको मधेश प्रदेश चाहिन्छ भन्ने व्यक्तिले आफ्नो केन्द्रीय समितिमा मधेशका बाइस जाति पनि समेट्न नसक्ने मधेशको पक्षमा को छ, मधेशी जनतालाई राम्ररी थाहा छ ।
यहाँ पार्टीको युवा तथा शसक्त नेताको नेताको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । ल भन्नुस्, युवाहरुको पक्षमा यहाँले कहिले काम गरेर देखाउने दिन आउँछ ?
– हामी निरन्तर काम गरिरहेको छु । यहाँले भन्न खोजेको कुनै पदिय दायित्वमा कहिले काम गर्नुहुन्छ, भन्ने जस्तो माने जनताको पक्षमा पदमा रहे पनि नरहे पनि काम गर्छु र गरिरहेनछु ।
अन्त्यमा लुम्बिनीखबर पत्रिका मार्फत के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
– यस पत्रिकालाई विशेषगरी सफलताको कामना गर्न चाहन्छु । तपाइहरुको यस पत्रिका मार्फत आफ्ना विचार राख्न पाउँदा अत्यन्त खुशी छु र अन्त्यमा आफ्नो पार्टीमा आबद्ध हुन अनुरोध गर्दछु ।